Muddo dheer oo walaac ah, oo la xiriira shaqadaada, noloshaada gaarka ah ama dhibaatooyinkaaga caafimaad, waxay kuu horseedi karaan daal. Xaaladdaan oo ah mid daal shucuureed, maskaxeed iyo jireed ayaa yareyneysa wax soo saarkaaga isla markaana daadinaysa tamartaada. Shaqooyinka maalinlaha ah ayaa kugu adkaada waxaadna noqoneysaa mid liita oo qadhaadh. Tababarkan, Todd Dewett wuxuu kaa caawinayaa inaad ogaato sababaha ugu waaweyn ee gubashada, sida maalmaha shaqada oo dheer, safarro shaqo oo aad u tiro badan, fasax la'aan, iwm. Marka raac talada tababarahaaga si aad uhesho wado aad uga hortagi karto isku buuqsanaanta. Waxaad markaa dareemi doontaa wax aad uga roon noloshaada.
Ka fogow gubashada Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeSida loo noqdo Khabiir TikTok ah 2020
Laga soo bilaabo maareeye ilaa hogaamiye: noqosho firfircoon oo iskaashi leh